पेरिसबाट एम्स्टर्डमको लागि रेलमा यात्रा3घण्टा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > पेरिसबाट एम्स्टर्डमको लागि रेलमा यात्रा3घण्टा
पेरिसबाट एम्स्टर्डम पुग्नको लागि त्यहाँ साँच्चै एक भन्दा बढी तरिकाहरू छन्. र गर्दा तिनीहरू सबै आफ्नो समर्थक र बेफाइदा साथ, रेल द्वारा एम्स्टर्डम गर्न पेरिस बाट यात्रा सबै भन्दा राम्रो विकल्प रहन्छ तपाईं तुलना गर्दा. हामी तपाईंलाई सबै कारण दिन रेल यात्रा आफ्नो पहिलो विकल्प हुनुपर्छ, तपाईं आइपुग्दा चाहनुहुन्छ विशेष गरी यदि एम्स्टर्डम पेरिस सुरक्षित बाट र शैली र सान्त्वना मा.
ट्रेन बनाम द्वारा एम्स्टर्डम गर्न पेरिस. यात्रा को अन्य मोडहरू
पेरिसबाट एम्स्टर्डमको लागि कार बाट यात्रा निस्सन्देहaसुरम्य ड्राइभ. तथापि, तपाईं समय उठयो र दुई शहर बीच सडक नेभिगेट गर्न पर्याप्त विश्वस्त छन् भने यो केवल अर्थमा बनाउँछ.
बिना जो मार्ग को तपाईंले लिन कार यात्रा पेरिस बाट एम्स्टर्डम गर्न, त्यहाँ सडकों छन्, टोल, र इन्धन खपत सोच्न. ड्राइभ लाग्न सक्छ6घण्टा, सबै भन्दा राम्रो मा; ताकि तपाईं आफ्नो बाँकी रोक्दछ लागि योजना आवश्यक छ. पनि, कुनै पनि सर्विसिंग विचार र इन्धन बाटो साथ आवश्यक, साथै एक खाजा ब्रेक रूपमा. ती सबै खर्च र माथि थप्नेछ गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं यो छ सुनेको तपाईँले बस लिएर विचार हुन सक्छ सस्ता तरिका पेरिस बाट एम्स्टर्डम यात्रा गर्न. जबकि यो सत्य हो, यात्रा लगभग हुनेछ7घण्टा. त्यो बाटोमा हुन लामो समय. तपाईं एक मा cramped हुनुहुन्छ किनभने यो पनि अब महसुस हुनेछ बस सीमित ठाउँ संग वरिपरि सार्न.
एम्स्टर्डम गर्न पेरिस उड्नु विकल्प पनि त्यहाँ. तर गर्दा उडान मात्र एक घण्टा हुनेछ र 15 मिनेट, यो भूमि बाट यात्रा को रूप मा उस्तै सुविधाहरू प्रदान गर्दैन. तपाईं पहिलो क्लास हुनुहुन्छ जबसम्म, तपाईं आफैलाई असहज विमान सिट मा crammed पाउनुहुन्छ.
त्यहाँ पनि कुनै सुन्दर छ युरोपेली दृश्यहरु जब तपाईं विमान यात्रा रमाइलो गर्न. तपाईं ज्यादातर तपाईं एक झ्यालको सिट मा विराजमान हुन के भने हेर्न गर्न बाहिर बादल छ छौँ; अन्यथा, तपाईं भरोसा गर्न सक्छन् एक मा-उडान चलचित्र राख्न मनोरंजन. र गर्दा भूल छैन हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दै सिद्धांततः पेरिस देखि एम्स्टर्डम प्राप्त गर्न सबैभन्दा छिटो तरिका हो, तपाईं अझै पनि समय र पैसा मा कारक गर्न आवश्यक यो विमानस्थल प्राप्त गर्न हुनेछ.
आरामदायी र सुविधा पेरिस को एम्स्टर्डम को ट्रेन द्वारा
जब पेरिसबाट एम्स्टर्डमको लागि यात्रा आउँछ, Thalys ट्रेनहरु को साथ ट्रेन यात्रा को सबै दुनिया को सबै भन्दा राम्रो प्रदान गर्दछ. यो यकीनन धन्यवाद यात्रा गर्न सबैभन्दा सहज र सुविधाजनक बाटो हो उच्च गतिको रेल. तपाईं सजिलैसँग रेलको वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ तर चाल पारेको महसुस नगरी पनि.
तपाईं पनि ट्रेन द्वारा यात्रा सुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ, तपाईं लापरवाह चालक संग सडक र राजमार्गहरू साझेदारी गरिरहनु भएको छैन थाह. र को गति मा 300 प्रति घण्टा मी, तपाईं पुग्न आफ्नो गन्तव्य आधा समय मा यो कार वा बस लिन थियो. उच्च गतिको रेल मा पेरिस देखि एम्स्टर्डम तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्3घन्टा र 19 मिनेट. र विमान द्वारा यात्रा विपरीत, तपाईं हुनेछ शानदार युरोपेली देहात रमाइलो गर्न.
अग्रिम आफ्नो रेल टिकट बुक, र तपाईं सस्ता दर आनन्द उठाउन सक्छौं, गरेर यात्रा थप आर्थिक विकल्प तालिम तपाईं योजना भने.
संग यात्रा गरेर Thalys गाडिहरु, तपाईं को टिकट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ 90 दिन आफ्नो यात्रा मिति अघि र सम्म सुरक्षित 75% रेल टिकट मा यदि तपाईं आफ्नो सिट आरक्षित प्रारम्भिक.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#traveleurope यूरोपेन्ट्रावेल europetravel longtrainjourneys सुझाव trainjourney Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह रेल यात्रा यात्रा ट्राभेलमस्टरडम traveltips